Ozbekistana: Hatsiaka Hafahafa, Fiafaràn’ny “Nirvana” ary ny Tena Politika Mikasika ny Miralenta · Global Voices teny Malagasy
Ozbekistana: Hatsiaka Hafahafa, Fiafaràn'ny “Nirvana” ary ny Tena Politika Mikasika ny Miralenta
Voadika ny 20 Avrily 2018 2:12 GMT
Tsy teo amin'ny fifandraisana Ozbeky-Tajik ihany no nisy akony ilay maripàna ambany be tsy dia mahazatra izay nitoetra ela tao amin'ny faritra fa tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Ozbeky ihany koa — tsy dia nihetsika tokoa izy io nandritra izay herinandro maro lasa izay. Na izany aza, mbola zava-dehibe ary mbola mendrika ho jerena akaiky ireto lohahevitra resahana eto ireto.
Naneho ny heviny ny bilaogy Khorezm momba ny fiovaovan'ny toetrandro ao Ozbekistana sy ny fomba ny nanovan'io hatsiaka mahery vaika io ny fiainana andavanandron'ny olona ao Khozerm [ro], izay manana toetrandro tena malefaka amin'ny ankapobeny mandritra ny taona.
Satria tsy mifandraika amina hatsiaka mahery vaika toy izao ny foto-drafitrasan'ny faritra, tena mijaly amin'ny tsy fahampian'ny angovo, tsy fahampian'ny tahirinà entona sy ny fanafanàna ireo Khorezmianina. Nihidy ireo sekoly, satria tsy afaka mianatra rehefa ambanin'ny aotra ny maripàna. Tokana ihany ny valintenin'ireo manampahefana amin'ny fanontaniana manahirana ny vahoaka: “Tsy afaka manao na inona na inona izahay, miandrasa mandra-pafanan'ny andro”. Nanontany olona maro i Khorezm ary nahalala ny momban'ny zavatra niainan'izy ireo mba ho tafavoaka velona. Niteny i Alisher, tanora iray mpampianatra, hoe:
Tsy vonona tamina toetr'andro tahàka izao ny vahoakan'i Khorezm. Nandritra ny fifdianana filoham-pirenena (23 Desambra 2007), nanana entona, jiro ary fanafanàna tao an-trano izahay. Talohan'ny Taombaovao anefa, nanjavona tampoka avokoa izany… Ireo sekoly any ambanivohitra no tena nijaly. Efa mila hitovy amin'ny maripàna any ivelany ny maripàna ao an-trano.
Na izany aza, tsy ny olona rrehetra no nijaly tamin'ilay hatsiaka – nametraka lamina mba hahazoana vola avy amin'io ny olona sasany. Nitambatra noho ny ranomandry nateraky ny ririnina ny renirano Ozbek roa, Amu-Darya sy Jeihun, izany no nanome fahafahana ireo tanora mba hitady tombony haingana amin'ny fandehanana mitatitra ireo entana miampita ilay renirano mivaingana .
“Lehilahy telo ihany no toa ahy teo amin'ilay renirano, kanefa maro be ireo olona no te-handefa ny entany. Arivo sum (eo amin'ny 0,85 Dolara Amerikanina eo eo) no hibatako lafarinina iray gony… Mazava ho azy fa sarotra ary tsy azo antoka ny miasa toa izany eo ambony ranomandry. Tsy manana safidy hafa anefa aho. Tsy afaka mahita asa aho mandritra ny ririnina, ary tsy maintsy mamelona ny ankohonako aho”, hoy ny fitanisàn'i Khorezm ny tenin'ilay lehilahy tanora .
Mandritra izany rehetra izany, miaina ny fianany manokana ny renivohitra – nanoratra lahatsoratra mahaliana i Registan momba ny fanakatonana ny tranombarotra “Nirvana” tany amin'ny tanànan'i Tashkent. Fantatra tsara tao amin'ny tanàna ny tranombarotra “Nirvana”, satria nivarotra ireo vokatra feo sy lahatsary tsara kalitao tamin'ny vidiny mirary izy ireo. Mihevitra i Registan fa tsy misy ifandraisany amin'ny adin'ny governemanta momba ny zon'ny mpamorona ny fiafaràn'ny “Nirvana”.
Fony aho tany Ozbekistana, nakatona nandritra ny fotoana fohy ny “Nirvana”, avy eo, toy ny amin'izao, maro ny manahy hoe misy olona ao amin'ny fitondrana manandrana maka ampahany aminà fandraharahàna iray ahazoana tombony. (Mety hoe ny lefitra vaovaon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ho an'ny kolontsaina angamba izany… Izany no karazana tetikadiny ara-pandraharahàna)
Ireo fanehoankevitra ihany koa no tena ampahany mahaliana amin'ity lahatsoratra ity, ao anatin'izany ireo mpamaky – ireo avy ao sy avy any ivelan'i Ozbekistan – dia miady hevitra raha toa ilaina ny mitsikera ny governemanta Ozbeky sy raha toa ka misy fitsipika sy lalàna ary zon'olombelona ao Ozbekistana. Mandritra izany fotoana izany, manoratra am-pifaliana ny Bilaogin'ny Vehivavy Ozbek fa voalohany ao Ozbekistana ny hoe vehivavy no mitantana ny parlemanta [ro]:
Tamin'ny 23 Janoary 2008, nisy ny fivoriana ara-potoana nataon'ny parlemanta mpanao lalàna. Araka ny vokatrin'ny fifidianana miafina, voafidy ho mpitondra tenin'ny parlemanta i Dilorom Tashmuhamedova [kandidà taloha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny volana Desambra 2007].
Mahaliana ihany izany, satria raha ny mahazatra, tsy mahazo fisondrotana izany mihitsy ireo kandidà nilatsaka ho filoham-pirenena nifaninana tamin'ny Islam Karimov aorian'ny fandatsahambato. Dingana iray vita iny ho an'ny governemanta Ozbeky, izay tena miezaka mafy tokoa ny handefa marika tsara ho an'ny Andrefana.